Queensland University of Technology - Fianarana any Aostralia
fanafohezan-teny : fanomezana
Aza adino ny discuss Queensland University of Technology
Queensland University of Technology, nohafohezina ho fanomezana, dia ho an'ny daholobe oniversite fikarohana miorina ao amin'ny tanàn-dehibe amoron-tsiraka tanàna ofBrisbane, Queensland, Aostralia. QUT Flag amin'ny campus telo ao amin'ny faritra Brisbane: Gardens Point, Kelvin Grove, and Caboolture. Manana ny anjerimanontolo eo ho eo 35,000 undergraduate mpianatra ary 5,000 Lahatsoratra nahazo diplaoma ireo mpianatra, izay 6,000 are international students. Manana ny 4 000 mpiasa, ary ny teti-bola isan-taona mihoatra ny $ 750 tapitrisa AU.
QUT laharana ao an-tampon'ny 10 Australian universities and the upper 3 per cent world-wide. QUT has been ranked as Australia’s best university under 50 taona ny Higher Education Times Top 100, and ranks 26th globally in that category. The university in its current form was founded 1989, rehefa avy eo Queensland Sekoly Momba ny Teknolojia (QIT) natambatra tamin'ny Brisbane College ny Advanced Education.p
Isika dia lehibe Aostraliana anjerimanontolo amin'ny fomba fijery manerantany sy ny 'tontolo tena izy’ ifantohana.
maherin'ny 50,000 mpianatra, anisan'izany ny efa ho 8,000 mpianatra iraisam-pirenena, ary ny teti-bola isan-taona ny mihoatra noho $800 tapitrisa, isika dia napetraka ny hivoatra sy hivelatra ho iray amin'ny firenena ny mpitarika anjerimanontolo.
Ny izao tontolo izao-kilasy oniversite
Queensland University of Technology dia iray fatra-paniry laza sy ny fiaraha-miasa fikambanana izay mikatsaka ny hampitaovana ny mpianatra, ary nahazo diplaoma ny fahaiza-manao izy ireo dia mila mitombo amin'ny fanamby nanakorontana ary izao tontolo izao. Ny nahazo diplaoma dia ahitana manam-pahaizana valo Rhodes, omena dimy ireo tao anatin'ny enin-taona.
Ny nahazo loka iraisam-pirenena Siansa sy Engineering Centre dia an-trano ny The Cube, Niaiky toy ny iray amin'ireo lehibe indrindra manerana izao tontolo izao ny fianarana sy ny fifandraisana nomerika miseho toerana. Nampiorina izao tontolo izao QUT voalohany Creative Industries Faculty, ary mampiasa vola be amin'ny fiaraha-miasa fianarana sy fikarohana interdisciplinary tontolo.
Ao amin'ny QUT tsy mampianatra teoria fotsiny, izahay, dia teoria ho fampiharana. Izahay fantatra iraisam-pirenena noho ny manome anao ny tsara indrindra amin'ny fahombiazana fahafahana:
Izahay iray amin'ireo ambony 300 anjerimanontolo manerantany (QS Anjerimanontolo Top Ranking, 2015).
QUT Business sekoly no laharana an-tampon'ny 1% ny raharaham-barotra maneran-tany sekoly. Izany dia iray amin'ireo raharaha sekoly voalohany tany Aostralia mba hahazoana telo accredition iraisam-pirenena (AACSB, EQUIS, amba).
Ny fampahalalam-baovao sy ny fifandraisana fanadihadiana dia laharana 1St any Aostralia ary 21St eto amin'izao tontolo izao (QS World University Ranking amin'ny Subject, 2016).
Izahay mandray ny mpianatra iraisam-pirenena. 85% dia fahazoan-dalana mankany QUT ny namany (International Student Barometer Queensland, 2014).
Ny nahazo diplaoma ny asa hanatrarana tanjona. Isika dia laharana 7faha any Aostralia sy any amin'ny 71-80 Band eran for nahazo diplaoma tsenan'ny asa (QS Graduate tsenan'ny asa Ranking, 2015).
Hery in fikarohana
Foana izahay anjara amin'ny fahalalana vaovao eo amin'ny sehatry ny fikarohana hery. Ny mpikaroka dia miasa mba hahitana vahaolana amin'ny zava-manahirana ankehitriny sarotra. Ao amin'ny Excellence tany fikarohana for Aostralia Ranking (ERA, 2015), 100% ny nametraka QUT fikarohana dia nandinika amin'ny fenitra, na izao tontolo izao ho ambony.
Manamboara ho an'ny asa
Queensland University of Technology taranja tsy tapaka nandinika sy havaozina mba hahabetsaka ny asa fahafahana sy hiantohana ny mari-pahaizana dia maneho ny farany orinasa fomba fanao.
Mihoatra noho ny isan-taona 6,000 mpianatra nahazo mari-pahaizana licence diplaoma avy amin'ny oniversite. Manohy ny outperform Queensland sy Aostraliana eo ho eo ny tahan'ny ho an'ny asa nahazo diplaoma.
Rehetra ny antokony dia natao mba hanatsarana ny asa fanantenana, ary isika koa dia afaka manampy anao hahazo orinasa-vonona amin'ny:
fifandraisana asa fampandrosoana fandaharana
asa fandaminana toro-hevitra
Fanamarihana Mahakasika ity ny CV
atrikasa sy ny mpitarika an-tserasera noho ny asa-fikatsahana sy miomana ho tafa sy dinika
ny asa rafitra mpanoro hevitra izay mampifandray ireo mpianatra amin'ny orinasa matihanina.
Ny fampianarana tehinao, ireo manam-pahaizana eo amin'ny saha. Ho izy ireo aingam-panahy ny fianarana, ary hanampy anao hanao orinasa manan-danja fifandraisana. Ny mpiasa dia tsy tapaka pirenena fantatra amin'ny loka noho ny tsara indrindra amin'ny fampianarana. Maro ny manontolo andro akademika mpiasa manana traikefa orinasa, ary ry zareo tohanan'ny mihoatra noho 3,000 tapa-potoana mpampianatra sy ny mpampianatra avy amin'ny indostria sy ny matihanina izao tontolo izao.
Strong orinasa fifandraisana
Queensland University of Technology taranja no natao, ary nandinika tsy tapaka amin'ny fifampidinihana miaraka amin'ny orinasa matihanina, mba ho azo antoka foana isika fihaonana fiovan'ny orinasa filàna.
Maro ny antokony manolotra fahafahana hiasa ao anatin'ny fikambanana, ary hahazo voninahitra manoloana ny mari-pahaizana, manome anao-tanana traikefa voalohany niara-niasa tamin'ny orinasa matihanina.
Izao tontolo izao Real-taranja
Ny antokony dia manome izao tontolo izao ny fianarana tena izy-traikefa. Real-izao tontolo izao ny fianarana fampidirana teoria, fahalalana sy ny fahaiza-manao amin'ny matihanina sy ny vanim-potoana fanao.
Asa-fampidirana fianarana dia voakambana rehetra ny undergraduate taranja. Afaka mahazo voninahitra manoloana ny Mazava ho azy fa amin'ny alalan'ny mpiara-fandaharam-pianarany dia asa traikefa, an-tsitrapo nametraka, tetikasa miaraka amin'ny orinasa na ny fiaraha-monina mpiara-miombon'antoka, toerana mitsidika, fianarana Tours sy ny fahafahana.
Ireo tena-tontolo fianarana traikefa manolotra anareo ny fahafahana hanana fifandraisana ao amin'ny orinasa voafidy, ataovy ny fianarana ho fampiharana, hanatsara ny fandraisana an-tanana, ny fanalàna olana sy ny fahaiza-manao Aza Tia Tena, ka hahazo fanandramana ny tena tontolon'ny asa any an-tsaha ny voafidy.
Queensland University of Technology has almost 8,000 avy amin'ny mpianatra iraisam-pirenena mihoatra noho 100 firenena mianatra aminay, ary maro ny mpampianatra sy ny mpampianatra efa niasa ampitan-dranomasina na manana fepetra iraisam-pirenena. Isika mampirisika sy hankalaza ny fahasamihafana ara-kolontsaina ao amin'ny toeram-pianarana amin'ny alalan'ny hetsika ara-tsosialy, fety, ary ny anjerimanontolo manerana zava-nitranga.
Ny fotoana eo amin'ny fiainanao
Ny fotoana ao amin'ny anjerimanontolo dia ho fiainana-manova. Isika mianatra manome fanohanana, hetsika ara-tsosialy, sy ny fampandrosoana fahafahana mba hahazoana antoka ny oniversite traikefa no tsara indrindra mety ho.
Siansa sy ny Engineering
The Gardens Point campus was once solely occupied by the 19th Century building, the former Government House of Queensland. In 1909, during the relocation of the Governor’s residence, Old Government House and the surrounding five hectares were set aside for both a University and a Technical College. The first university on the site was the University of Queensland which was moved to St Lucia in 1945, toerana amin'izao fotoana izao dia mbola.
Ianao ve mila discuss Queensland University of Technology ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Photos: Queensland University of Technology ofisialy Facebook
Charles Sturt University Tsiroanomandidy